::Rojgar Manch||Online Newspaper :: Employment Nepal News, Financial Nepal News, Nepal Breaking News, Nepali Latest News, Top Headlines News, National, Political News, Social, Sports, Economy, Business, Health, Entertainment, Nepali Movie, Nepali Music Video and World News, Nepal Bank News, business news, Bank Credit Profit, Sale, Nepal Tourism Year news, Vehicle loan, sale, Nepal Weather विदेशबाट फर्किएका युवालाई नीति तथा कार्यक्रममा वेवास्था गरिएको गुनासो:: Rojgar Manch ::
विदेशबाट फर्किएका युवालाई नीति तथा कार्यक्रममा वेवास्था गरिएको गुनासो
बुधवार, २०७५ जेष्ठ ०९ गते २१:३७
सविता शर्मा / सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत रोजगारीका लागि बिदेश जानुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न 'प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम' ल्याउने घोषणा गरेको छ । तर बैदेशिक रोजगारीमा गएर स्वदेशमै केही गरौ भन्ने सोचसहित फर्केका युवाको सीप, क्षमता र ज्ञानलाई उपयोग गर्ने सम्बन्धमा भने नीति तथा कार्यक्रममा नबोलिएको भन्दै कतिपय युवाले गुनासो गरेका छन् ।
बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर व्यवसाय गरिरहेका उत्तम अधिकारी भन्छन, ‘बिदेशबाट फर्केको जमात के गर्दै छ ? यो जनशक्तिसँग भएको पूँजी र सीपलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा कसरी जाड्न सकिन्छ ? भन्ने कुराको खोजी गरिने सङ्केत नीति तथा कार्यक्रममा पाइएन ।’
सरकारले योजना र कार्यक्रम बनाएर त्यस्ता युवाकोे पुँजी र सीपको उपयोग गर्नु राम्रो हुने उनले बताए । सीप, क्षमता र पूँजी भएपनि विदेशबाट फर्किएको धेरैजसो जनशक्ति अलपत्र अवस्थामा रहेको आफूलाई जानकारी पाएको उनले बताए । 'विदेशबाट कमाएर ल्याएको पैसा डुल्ने–घुम्नेमा सकिएपछि धेरै युवा फेरी विदेश फर्किने अवस्थामा रहेका छन्', उनले भने ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको तथ्याङ्कसमेत अहिलेसम्म कुनै सरकारी निकायले सङ्कलन गरेका छैनन । बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आएका युवालाई सरकारले उचितरुपमा सम्बोधन गर्नका लागि पनि तथ्याङ्कको जरुरी पर्दछ ।
यस्ता युवा देशभरि छरिएर रहेका छन् र उनीहरू कतै संगठित पनि भएका छैनन् । युवाको पूँजी सीप, क्षमता, ज्ञान र अनुभव स्पष्टसँग खुल्ने तथ्याङ्क भएमा नयाँ र राम्रा सम्भावनाका उत्पादनशील क्षेत्रमा उनीहरुको सीपको उपयोग गर्न सकिने भुक्तभोगी युवाको अनुभव छ ।
बैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकका बारेका जानकार बिष्णु खत्री विदेशबाट फर्केकाले पुँजीसँगै सीप, दक्षता र अनुभव लिएर आउने हुँदा त्यस्तो जनशक्ति प्रयोग गर्नका लागि पनि तथ्याङ्क राख्न जरुरी भएको बताउछन ।
उनी भन्छन, ‘इजरायलमा कृषि पढेर÷सिकेर आउने कति छन् ? कोरियाबाट कृषि र उद्योगमा के कस्ता सीप सिकेर आए उनीहरुको सीपको प्रयोग कहाँ गर्दा मुलुक र ती युवाको हितमा हुनसक्छ ? यसको खोजी र सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।’
अध्यागमन विभागसँग कति विदेश गए र कति नेपाल आए भन्ने सामान्य तथ्याङ्क मात्र छ । अध्यागमन विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी राजुप्रसाद पौडेलले तथ्याङ्क वर्गीकरण गरेर नराखिएको बताउछन । 'हामीसँग विदेश गएको र आएको तथा राष्ट्रियता मात्र हाम्रो तथ्याङ्कमा हुन्छ', उनले भने । अब सफ्टवेयर अपडेट गर्दा कुन भिसामा गएको र आएको हो छुट्याइने उनले जानकारी दिए ।
श्रम स्वीकृति लिएर बिदेश जाने र आउनेको तथ्याङ्कलाई सफ्टवेयर बनाएर व्यवस्थित गर्दा यस्तो तथ्याङ्क सजिलै सङ्कलन गर्न सकिने जानकारहरूको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगार विभाग र अध्यागमन विभाग मिलेर यो काम सजिलै गर्न सक्ने बताइएको छ ।
युवाको उमेर, सीप, क्षमता, अनुभव र रुचिको क्षेत्र खुल्ने गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सकेमा उनीहरुका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सजिलो हुुने खत्री बताउछन । उनीहरुको क्षमता रुची र उमेर पहिचान गरेर सरकारले ‘प्याकेज’ बनाउनुपर्ने र त्यस्तो कार्यलाई सरकारका नीति र कार्यमक्रममै समेट्नु पर्ने समेत उनले बताए ।
'बिदेशबाट फर्कन चाहनेहरु पनि यस्ता प्याकेजबाट आकर्षित हुनसक्छन्, यस्तो दर्ताको प्रणाली विकास गरेर केही नयाँ र आकर्षक ऋण अथवा व्यवसाय गर्नका लागि सहज हुने खालका प्याकेज बनाइयो भने आफैं पनि दर्ता गर्न आउँछन्', उनले भने ।